Judo : tanjon’Andrimifehy Mireille ny ho tompondaka Olympika | NewsMada
Judo : tanjon’Andrimifehy Mireille ny ho tompondaka Olympika
Par Taratra sur 12/08/2016
Andriamifehy Mireille Ifaliana. Mpikatroka judo eo amin’ny sokajy “cadette” -52 kg ao amin’ny klioba Esca. Teraka ny 15 febroary 2001 ary 15 taona izy ankehitriny. Kilasy 1ère C ao amin’ny sekoly Esca Antanimena.
Namirampiratra ary nisongandina nandritra iny “Jeux de la CJSOI” andiany faha-10 teto amintsika farany teo iny. Nandrombaka medaly volamena roa ny tenany tamin’izany ka ny iray teo amin’ny katrok’ady ho an’olon-tokana ary ny iray kosa teo amin’ny isan-tarika (par équipe). Tsy vitan’izay ihany fa efa nandrombaka medaly volamena tamin’ny Timin sy Ticad tatsy La Réunion ny tenany, ny taona 2014. In-telo nandrombaka ny tompondakan’i Madagasikara teo amin’ny sokajy « cadette » ( 2014, 2015, 2016) raha in-droa (2014, 2015) teo amin’ny sokajy « minimes ».
Araka izany, mitana ny laharana voalohany nasionaly eo amin’ny sokajy misy azy i Mireille, amin’izao fotoana izao. Tsy mbola nisy nahatohitra azy aloha, hatreto, ireo mpifanandrina malagasy eo amin’ny sokajy misy azy. Toraka izany koa ireo Renioney, mpifanandrina taminy tamin’iny CJSOI 2016 iny.
Tanjon’i Mireille kosa eo amin’ny tontolon’ny judo ny handray anjara sy ho voasokajy hiatrika ny Lalao Olympika ary ho tompondaka Olympika.
Raha ny mikasika ny andavanandrom-piainan’i Mireille indray, hainy tsara ny mampiaraka ny judo sy ny fianarany. In-telo isan-kerinandro izy no manaraka fanazarantena ao amin’ny klioba Esca, ny alarobia sy asabotsy hariva ary ny alahady maraina. Ankoatra izay, rehefa tsy mianatra ka mijanona an-trano izy dia ny mitendry gitara no ankafiziny. Mahay ny taranja lomano ihany koa i Mireille. Tanjony amin’ny fianarany indray ny ho lasa ingénieur de bâtiment.
Ankoatra izay, tsy nohadinoan’i Mireille kosa ny misaotra ireo nanohana azy tamin’iny CJSOI 2016 iny, ny ray aman-dreniny, ny klioba Esca, ny fitondram-panjakana ary ny federasiona malagasin’ny judo (FMJ).